Feysal Cumar Mushteeg (1940kii-2012ka) Qormada 7aad
You are here: Home Home Feysal Cumar Mushteeg (1940kii-2012ka) Qormada 7aad
Mar uu naftiisan joogsan weyday ka hadlayayna wuxu yidhi:
“Waa tan oo miridh kaa maqnaan weydee,
Maleeyoo bal maxaa I soo wada,”
Waxa kale oo uu intaa ku kabayaa:
“Ma-huraan gacal ahi ma kala maarmee,
Ma-naxaan nacab midigta hay gelinoo,
Munaay hayna kala maqnaysiin,”
“Labada dherer way u dhexaysaayoo,
Labada dheemman way u dhexaysaayoo,
Ma dhuubna dhumuc weynna lama siinnoo,
Ma dhiirrana dhagarna kama baqatoo,
Waa dheddig ninna way u dhigantaa,”
Buyuud ka mid ah Qaraamkii hodanka iyo curiskaba ahaa ee Feysal Cumar Mushteeg
Mar uu ka calaacalayay jacaylkiisii oo uu calfan waayayna, waxa laga hayaa:
“Hashaydii Mudheen maqaarka u siday,
Halkii mayay lehba hashaan marin jiray,
Hashaydaan manka iyo mirrowga u guray,
Maankayga midhkaasi geli maayee,
Ma maantaa lay yidhi nin kale maal,”
Bal hadda aynu ku sii soconno curintii la yaabka lahayd ee Feysal Cumar Mushteeg, waxaanu intaa hore ku daray:
“Maxaygu musbaaray magaceedoo,
Sidii mara-boobta iigu marayee,
Macaaneeyay ruuxa iga maqan,”
Haddana waa kan inala tegay Sucuudigii iyo sannadihii uu ku maqnaa, waxaanu yidhi:
“Meeshuu Cantar geela soo mariyiyo,
‘Mid Way’ baan murti kaaga tiriyaa,”
Wuxu intaa hore ku darayaa:
“Marwaadka dhexdeenna maansho Allee,
Macbuud dhigay wuu macaan yahay,”
Malaha adigaa mabsuud u ledee,
Sidii baan u muusannaabaa,”
Immikana waa London. Wuxu ka daba-tegay kalgacalkiisii. Tilifoonnadan waddada mid ka mid ah ayuu kala hadlay, ka dib markii uu helay lambarkeedii. Wuu la hadlay. Waxay ugu soo jawaabtay: “Adigii ma tihid.” Kiiyoo tilifoonkii haysta ayuu tuducan soo socda ku qaaday codka ‘Jawhariyo Luul.’ Saddex nin oo caddaan ah oo daba taagnaa ayaa mid ka mid ahi yidhi: “Ilaa inta uu dhammaynayo waa aynu sugaynaa.” Busi ayaa iiga sheekeeyay, waxaanu Feysal Cumar Mushteeg yidhi:
“’Es double yuu wan’ (SW1) baad ka dheeshaayoo,
Ma dheeride waabad dhowdahayoo,
Dhawaaqayga waad maqlaysaaye,
Dhibtaydaad wanaag ka dhigataa,”
Ma ammaanteedii baa? Waa kan Feysal Cumar Mushteeg, waxaanu yidhi:
“Labada dherer waw dhexeysaayoo,
Labada dheemman waw dhexaysaayoo,
Immikana waa kan dhulkii la hadlaya. Ku-ye:
Waxa kale oo uu kalgacalkiisii ku yidhi:
“Dhiiggeenna midee la kala dhuray iyo,
Miyaanay ku dhibaynin dhalashadu,”
Immikana wuxu ka hadlayaa dhibaatada jacaylku u geystay iyo inta ay le’eg tahay, waxaanu yidhi:
“Dhibtayda dadkaa ka dhuumanayoo,
Dhirtoo maqashaan I dhaafteenoo,
Dhagaxay damqan laa dhadhaabta ah,”
Mar uu murtidiisa ka hadlayay, wuxu yidhi:
“Afkayga dhalay dhiil u soo qaatoo,
Bad baan dhurayaaye dhaansado,
Murtida kuwa dhabarka lagu sido iyo,
Kuwaan dhalan meel u sii dhiga,”
Sohdimaha ammaantana Feysal Cumar Mushteeg waa uu ka gudbay oo waa ka ereyadan ku muunaynaya kalgacalkiisii, waxaanu yidhi:
“Mid aan u dhigooy la dhaban tahay,
Ma dhalan dhabarkana laguma sido,”
Wuxu intaa ku daray:
“Dhaqaaqay jacayl I dhaan-dhaanyoo,
Is-dhiibay anoon afeef dhigan,”
Immikana waa kan xaggaa iyo Hawdkii inala tegaya, ku-ye:
“Dhugatoy sida geel dhukaan qaba,
Dhalaalayoo dhiiggu iga madhayoo,
Dhibiibyayoo waan is-dhalan-rogay,”
Mar kale wuxu jacaylkiisii ku odhanayaa:
“Wixii ku dhibaaba igu dheeroo,
Dhud yahay baxday laygu kaa dherer,”
Dhaayahoon ku arkayn dheguhu ku maqlee,
Dhawaaqaaqi sow lamaan dhicin,”
Mar kalena waa kan leh ama odhanaya:
“Dhuumashaa jirta dhabarku muuqdaayoo,
Nin weyn dhalanteed laguma sasabee,
Intaan xeedhiyo fandhaal kala dhicin,
Dhammee arrinkeennan kala dhiman,”
Halkanna hal-ku-dheg dhaxal-gal ah ayuu inoogu reebayaa. Oo muxuu odhanayaa:
“Dhimasho noloshii dhibaato leh,
In ay dhaanto ii ma dhaadhicin,”
Immikana waa kan ina leh:
“U dhuubtay sidii ulaha dhebigoo,
Dhexdayda surwaalkii wuu ka dhacee,
Dhan kale sow tan ii la dheelliday.”
Halkan hoosena aan idiin ku taxo buyuud aannaan xagga hore ku soo qorin oo aan is-leeyahay Feysal Cumar Mushteeg mar danbe ayuu xusuustay oo saaxiibkeen Busina ka qoray, waxaanu yidhi:
“Naqaa ka bixiyo labada naas,
Nimcada Herer waa ku noolow,”
Waxa kale oo ka mid ah beydkan hal-hayska noqday:
“Nabiilaay adigiyo nalkaa Mijir Koos,
Noolaada Herer waydin nuurteen,”
Waxa kale oo ka mid ah beydkan caanka ah:
“Nugaaleey waan jeclaa in aan ku noqdoo,
Nasiibkaygu waa annagoo nabadiyo,
Idinkoo nololiyo naq roobaad,”
Maxamed Cumar oo loo yaqaanno Maxamed-Dhuux, ayaa mar uu iiga warramayay Feysal oo ay isku fasal ahaayeen ii sheegay in curinta Feysal u badnayd gole-ka-fuul aanu waqti badanba ku qaadan. Wuxu iiga sheekeeyay maalin ay xiisad Juqraafiya ku jireen oo ‘Projector’ wax loogu dhigayay. Dersigu wuxu ku saabsanaa dalkaa Talyaaniga, gaar ahaan magaalada koonfurta ku taal ee ‘Napoli’. Macallinkii ayaa hadalkiisii ku daray: “Magaaladaa Napoli hablaheeduna waa wax qurux badan.”
Feysal, wax badanba kuma ay qaadan in uu isla markiiba beyd iyo laba ka tidco faalladii macallinka, waxaanu yidhi maalintaas:
“Nikoosiya oo naq roob helay,
Napoli way ka naago wacan tay,”
Nikoosiya waxay ahayd xaruntii dalka Qubrus oo ahayd ‘Nicosia’, looguna dhawaaqo ‘Nikoosiya’. Xaafad Boorame ku taallay oo Feysal dareenkiisu ku cindanaa ayaa berigaa la odhan jiray Nikoosiya.
Waa dhaqan ay Soomaalidu leedahay, gaar ahaan Somaliland leedahay in ay dadka ama magaalooyinka u bixiyaan magacyada inta badan war-baahinta ku soo noqnoqda.
Beryihii uu bariga beddelka ku tegayna wuxu ku sii daray:
Dunida dabadeedaa lay dirayoo,
Tixihii Qaraamiga ahaa ee Feysal Cumar Mushteeg waxaynu ku soo koobaynaa xarfahan ‘La’da ah, waxaanu yidhi:
“Lawaaggii horaan la soo noqonnoo,
Malaha Leyla waaban laasimi,
Layli baa la I saaray leeddo ahoo,
Lur mooyee adduunyo liil ma lahoo,
Lammaankii naftaydu kala lume,”
Intaas ayaynu ku joojinaynaa curintiisii Qaraamka, isagana Ilaahay ha ka abaal-mariyo.
Waa Qormooyinkii ugu danbeeyay ee aynu ku muunaynay fanaankii weynaa ee Feysal Cumar Mushteeg oo suulkiisii iyo saxeexiisiiba kaga tegay guud ahaanba fanka Soomaaliyeed, gaar ahaanna qaybaha curinta, luuqda iyo jilidda. Waxa intaa u dheeraa isaga oo ahaa sheekeeye wanaagsan oo aan maadeynta iyo qosolka loogu bir-dhigan.
Intaa ka-sokow wuxu lahaan jiray sheekooyin yar oo aad u gaaggaaban oo qosol miidhan ah. Haddii aynu sheekooyinkaa godollo ka soo qaadanno, waxa la sheegay in beri uu ka soo duulayay Madaarka dayuuradaha ee Abu-Dabi uu baasaboorkiisii mid gabdheed ku qaldamay. Gabadhaa waxa la odhan jiray ayaa la yidhi Sahra. Markii uu sarkaalkii socdaalka baasaboorkiisii u dhibay, ayuu sarkaalkii ku yidhi: “Magacaagu ma Sahraa?” Af-carabi ayaa su’aasha lagu weydiiyay, isaguna wuxu ku jawaabay: “Maya e’ magacaygu waa Warda.”
Waxa kale oo la sheegay in habeen qolo boolis ahi isaga iyo saaxiibkii goor habeennimo ah ku qabteen magaalada Jidda. Magacyadii ayaa la weydiiyay. Waa beryihii Boqor Feysal dalka Sucuudiga xukumi jiray. Ka dibna wuxu sheegtay magaciisii dhabta ahaa ee Feysal oo wuu iska illoobay magacii uu waraaqaha ku haystay. Saaxiibkii ayaa is-yidhi magaca Boqorka ee Feysal ayuu ku baxsadaye adna Fahad sheego. Sidii ayuu isaguna Fahad ku sheegtay oo ay ku nabad-galeen.
Beryihii aanu ku jirnay halgankii hubeysnaa ee shacbiga ahaa ee dibuxoreynta Qaran ee SNM horseedka ka ahayd ayay maalin magaalada Balli-gubadle koox dayday ahi rasaas ka rideen. Sidii ballantu ahayd, shaqaalihii idaacadda ayaa alaabtii la cararay. Feysal Cumar Mushteeg oo ka mid ahaa dadkii xarunta idaacadda ku sugnaa ayaa buste cusub oo kuwan shabeelku ku sawiran yahay ah oo Qadar looga keenay la isaguna cararay. Markii la isku soo noqday ayaa Feysal la weydiiyay wuxu kelidii u baxsaday ee uu alaabtii Idaacadda taallay wax uga guri waayay, waxaanu ku jawaabay: “Aniga ‘spare parts-kayga’ ayaan la helayn haddii ay wax igu dhacaan.”
Berigii Hargeysa la soo galay 1991kii ayaa Cajab halkan baabuurta lagu maydho la furay. Dadka magaalada markaa soo degay reer miyi ayuu u badnaa. Waa ay daawan jireen marka baabuurta la dallaco. Feysal Cumar Mushteeg ayaa maalin yar ag joogsaday. Mid ay saaxiibbo yihiin oo ag marayay ayaa ku yidhi; “Waar Feysal maanta jaad noo qaad.” Feysal Cumar Mushteegna wuxu ugu jawaabay: “Bal dadka aan dhex joogo eeg ee aad jaadka I weydiinayso.”
Beryihii Hargeysa lagu soo noqday ayuu dadkii wada garan waayay. Wuxu ku sii dawakhay dadkii buuxiyay shacabka iyo ‘Indian Line-ka’. Baar Hargeysa ayuu subaxdii iyo galabtii hor fadhiisan jiray. Wuxu eegi jiray dadka soo kallahay iyo inta sii carraabaysa. Waxba wuu ka garan waayay. Markaas ayuu yidhi: “Waa dadkii ay Hargeysi berigii hore ka buuxsantay.”
Dhowr iyo sagaashammadii annaga oo fadhina xaruntii hore ee Idaacadda ee Timacadde ayaa nin noo soo galay. Ninkaasi wuxu ka mid ahaan jiray shaqaalihii ka hawl-geli jiray Wakaaladihii Badroolka ee dawladdii Soomaaliyeed ee nidaamkii Siyaad Barre. Ninkii ayaa yidhi: “Xalay waan riyooday ee ma idiin sheegaa riyadaydii?” Feysal Cumar Mushteeg oo nala fadhiyay ayaa ugu jawaabay: “Maya ee aniga ayaa sheegaya.” Waanu yaabnay. Ka dibna Feysal ayaanu ku nidhi sheeg. Feysalna wuxu yidhi: “Waxaad ku riyootay adiga oo haamihii badroolka ee Berbera ku dabbaalanaya.” Isaga iyo ninkii oo maanta inaga hooseeyana Ilaahay dhammaantood ha u wada naxariisto.
Nin Mareykanka jooga oo qormooyinka Feysal Cumar Mushteeg akhriyay ayaa isaguna sheekadan yar ii soo diray, waxaanu yidhi:
“Feysal Dugsiga Qalax ee Gebilay waxaan u malaynayaa in uu hal ‘term’ ka shaqeeyay. Nin la odhan jiray Tallaaboo oo ku dhintay Sucuudiga, oo ahaa kooxdii naga horreysay ayaa iiga sheekeeyey sheeko soo kala martay Feysal markuu Qalax macalinka ka ahaa. Feysal ayaa ku sigaar beelay Qalax habeennimo, markaasuu soo toosiyay dhowr arday oo ku ogaa in ay sigaarka cabbaan. Wuxu yidhi Tallaabo ka mid baan ahaa ardaydaas. Wuxu yidhi aad ayaanu u naxsanayn oo macallinkii ayaa yidhi sigaarka ayaad cabtaan. Wuxu yidhi intaas ka dib Feysal ayaa sii jeestay oo yidhi idin ma arkayo e’ gacantaas sigaar ha la soo saaro. Markaas ayaanu jeebka gacanta gelinnay oo xabbad sigaar ah gacanta u saarnay”
Nin Xasan Ismaaciil la yidhaahdo oo fannaan ah ayaa Feysal maalin ku yidhi: “Waxaan doonayaa in aan xamar tago.” Waa dhowr iyo sagaashankii. Busi ayaa iiga sheekeeyay. Feysal baa wuxu ugu jawaabay: “Oo xabaalaha Hargeysa miyaa laguu diiday, halkan ayaaba laguugu faataxaynayaaye.” Xasan Ismaaciil ayaa hadalkii ku noqday oo yidhi: “Carruurta iyo xaaska ayaan is-lahaa soo kaxayso.” Feysal ayaa hadalkii ku celiyay oo markanna yidhi: “oo markii hore maad intaa noo soo horraysiisid.”
1997kii muddo sannad ku dhow ayaan ka hawl-geli jiray wargeyska Jamhuuriya. Maalin maalmahaa ka mid ahayd ayuu Fetsal Cumar Mushteeg noo yimid waqti galab ahayd, naxariistii Janno Ilaahay ha ka abaal-mariyo e’. Wuxu naga codsaday in aanu ka qorno maqaal yar oo koobnaa oo uu doonayay in uu kula kaftamo Madaxwenihii jamhuuriyadda Somaliland ee xilligaas, waxaanu maalintaa yidhi hadal u ekaa: Aniga iyo ‘James Brownba’ waxaanu ahayn laba heesaa oo caalamiya oo madow oo heesi jiray toddobaatannadii. Markii aanu xabeebannay ayaanu iska daynay heesihii oo ka fadhiisannay. Haddaba is-weydiintu waxay tahay, tolw tan siyaasad ah miyaan lagu xabeeban iyada oo aan la iska daynin.
Feysal Cumar Mushteeg ma heeso badnayn. Bal se heesahaa koobnaa ee uu ku qaadi jiray, ma ay jirin cid la ag dhigo luuqdaas oo kale lahayd. Luuq la yaab leh oo in yar xabeeb ahi ku jirto ayuu lahaa. Waxa luuqdiisaa sii macaanayn jiray xabeebtaa yare e ku lammaanayd. Hadda xabeebtaasi haddii ay cid kale oo heesaa ah ladhi lahayd, waxa laga yaabaa in aan sidaa Feysal Cumar Mushteeg loo jeclaadeen.
Inta uu heesayo wuxu ku dari qosol uu fooladha qaawinayo. Waxa u raaci dhawaaqyadii iyo sanqadhihii la yaabka lahaa ee uu keligii samayn jiray, miyuusigga loo tumayana ku kaabi jiray. Sacabku isagu wax u gaar ah ayuu oo uu u tumi noocyo aynaan malayn Karin. Marka aan arko isaga oo tumayaba, waxaan is-odhan jiray tolow ma laga reebi oo da’-yartu ma ka dhaxli doontaa.
Heesaha uu qaadi jiray kuwa aan ugu jeclahay wax aka mid ahayd Subcis oo aan dhowr iyo kontonkii dhegaysan jiray aniga oo carruur ahaa. Sidaan hore u soo sheegay wuxu Radio Hargeysa heestaa u duubay 1958kii. Waa halka uu ku godlan jiray ee curintiisa ku barbarian jiray.
Heesaha kale ee la yaabka leh ee uu qaado wax aka mid heellada la yidhaahdo ‘Riftoor’. Waa magic laga soo dheegay sida aan u malaynayo cadar lagu isticmaali jiray Jabuuti oo la odhan jiray ‘Reve d’ or,’ oo markii la soomaaliyeeyay noqday ‘Riftoor’. Waxa ku luuqeeya oo si la yaab leh ugu leexaysta Feysal Cumar Mushteeg. Si aanan sharxi karayn ayuu u qaadaa. Marka uu qaadayo waxaad moodaysaaba in uu gucle-orod ku jiro oo uu meel buur ah fananayo. Waa marka ay ugu fiican tahay xabeebtiisu.
Heesaha kale ee uu qaado waxa kale oo ka mid ah:
Heedhe gabadhyay heedhe: Ereyadii Axmed Saleebaan Bidde,
Hay gabine: Cabdiraxmaan Xasan iyo beydka saddexaad oo Feysal Cumar Mushteeg ku daray,
Ha derderin Carrada ha doorin: Ereyadii xasan qowdhan,
Lacageey: Ereyadii Cali Sugulle Dun-carbeed,
Meydal qoor dheer: Ereyadii Axmed Saleebaan Bidde,
Mar qubnay mar cabnay: Cabdalle Sagsaag,
Subcis: Ereyadii Feysal Cumar Mushteeg,
Rifdoor: Ereyadii Feysal Cumar Mushteeg,
Sidaas ayay taariikhdu ku xusi doontaa feysal Cumar Mushteeg iyo kaalintii uu ka soo galay guud ahaanba fanka Soomaaliyeed.
Ilaahay naxariistii Janno ha ka waraabiyo, innagana Samir iyo iimaan ha inaga siiyo. Ilaahay ha ina kulmiyo mar kale iyo Qormooyinkan oo isku dhan isla markaana tifaf-tiran oo sawirro leh. Fadlan wixii aad noogu soo deeqi kartaan nagu soo caawiyo.
Waxaynu ku soo gunaanadaynaa tixdan ee baroor-diiqda ah ee uu Cabdirasaaq Maxamed ka dul tiriyay qabrigii Feysal Cumar Maxamed (Mushteeg) oo ay dad badani dul joogeen, waxaanu arar uga dhigay:
“Wuxuu ruux qadeeyaba hadday, qiricdii gaadho
Cudurrada wax qaatila, hadii qoorta loo geliyo,
Ee uu qal-dhabo.ee wax badan, quudka cuni waayo,
Ma soo booqataan maalin qudha, mana quwaysaan,
Qaadaa-dhiggeedii hadduu mowdku, Yara qaado,
Mid la qaliyo xoolaha waxaad, wada qorshaysaanba,
Qayo aad ka shiinto iyo maxaad, Timir u soo qaadi,
Noloshaa wax layskugu qabtaa, Qoommamada daaya,”